Izindiza eziseNingizimu ne-Afrika manje zine-United Airlines ne-Airlink
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza eziseNingizimu ne-Afrika manje zine-United Airlines ne-Airlink
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Lokhu kuhlanganiswa kuzokwenza kube lula ukuthi amakhasimende ethu aseNyakatho Melika afinyelele e-Okavango Delta, eChobe, eKruger National Park nasezindlini eziseduze zemidlalo, eKapa, ​​eGarden Route, eSakopmund naseCopperbelt, phakathi kwezinye.
I-United Airlines ne-Airlink bamemezela isivumelwano sokuhweba esisiza amakhasimende ahlole i-Afrika eseNingizimu.
Ubambiswano olusha lunikeza amakhasimende uhambo olulula lokuya ezindaweni ezingaphezu kwezingama-40 eziseNingizimu ye-Afrika.
Amakhasimende e-United Airlines manje angathola noma ahlenge amamayela ezindizeni ze-United ne-Airlink.
Namuhla, i-United Airlines ne-Airlink, inkampani yezindiza yaseNingizimu Afrika, imemezele isivumelwano esisha se-codeshare esizonikeza amakhasimende ukuxhumana okuningi phakathi kwe-US ne-Southern Africa kunanoma yimuphi omunye umfelandawonye wezindiza. Isivumelwano esisha, esingaphansi kokuvunywa nguhulumeni, sizohlinzeka ngesitimela esisodwa esivela eMelika ezindaweni ezingaphezu kwezingama-40 eziseNingizimu ye-Afrika. Ngokwengeziwe, i-United izoba yinkampani yezindiza yokuqala ukuxhuma uhlelo lwayo lokuthembeka ne-Airlink, ivumela amalungu eMileagePlus ukuthi athole futhi ahlenge amamayela lapho behamba ngezindiza ze-Airlink. Lokhu kubambisana okusha kuzoba ngaphezu kokubambisana okukhona kwe-United nelungu le-Star Alliance iSouth African Airways.
“I-United iyaqhubeka nokukhombisa ukuzibophezela kwethu e-Afrika, ukuqala izindiza ezintathu ezintsha sha kuleli zwekazi kulo nyaka kuphela kubandakanya nezinsizakalo ezintsha eziya e-Accra, eGhana; ILagos, iNigeria neGoli, iNingizimu Afrika, ”kusho uPatrick Quayle, iphini likamengameli wezokuxhumana kwamazwe omhlaba kanye nemifelandawonye yawo Lufthansa. “Futhi manje ngesivumelwano sethu se-codeshare no Airlink - okuwubambiswano olunabile kakhulu e-Afrika eseNingizimu - amakhasimende azokwazi ukuhlola kalula izindawo ezinamabhakede amaningi kulo lonke izwekazi kubandakanya ukuxhumana okulula neZambia, Zimbabwe nokuningi. ”
Lufthansa iqhubekile nokwandisa umkhondo wayo wangena e-Afrika, ngokuhlinzeka ngqo ezindaweni ezine zase-Afrika. Ngasekuqaleni kwale nyanga, i-United imemezele ukuthi izindiza phakathi kweWashington, DC neLagos iNigeria zizoqala ngomhla ka-29 kuNovemba, kuncike ekuvunyelweni nguhulumeni. Ngasekuqaleni konyaka, i-United yethule insizakalo entsha phakathi kweNew York / Newark neGoli, iNingizimu Afrika naphakathi kweWashington, DC ne-Accra, eGhana, okulindeleke ukuthi isebenze nsuku zonke ngalo Disemba nangoJanuwari. Insizakalo edumile ye-United phakathi kweNew York / Newark neCape Town, eNingizimu Afrika nayo izophinda iqale ngoDisemba 1.
“INyakatho Melika iyimakethe ebalulekile yomthombo wezindawo esiya kuzo. Lokhu kubelana ngamakhodi kuzokwenza kube lula ukuthi amakhasimende ethu aseNyakatho Melika afinyelele e-Okavango Delta, eChobe, eKruger National Park nasezindlini eziseduze zezindawo zokudlalela izilwane, eKapa, ​​eGarden Route, eSakopmund naseCopperbelt, phakathi kokunye, ”kusho uDkt. Airlink I-CEO kanye noMqondisi Ophethe, uRodger Foster. "Ngokunjalo, ukwabiwa kwama-codeshare kusho ukuthi amakhasimende ethu emazweni ayi-12 ase-Afrika esiwakhonzayo njengamanje, azokwazi ukufinyelela ngokushesha nangaphandle kwenethiwekhi kuyo yonke inethiwekhi ye-United."
Lokhu kubelana ngamakhodi okusha kuzosetshenziswa lapho uhulumeni evuma okokugcina.